အဓိကအား Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်တစ်နမူနာအကြားဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှု, မြို့ပြ-Resident, အသက်မပြည့်သေးလူငယ် (2015) - သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Porn တွင်
ပြုမူနေသိပ္ပံ (ဘေဆယ်) ။ 2015 ဒီဇင်ဘာ 23;6(1) ။ pii: E1 ။ Doi: 10.3390 / bs6010001 ။
Rothman EF1, Adhia တစ်ဦးက2.
ဤသည် Cross-Section လေ့လာမှုကိုအမေရိကန်-based, မြို့ပြ-Resident တစ်နမူနာ၏ဦးစားပေးကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းလက္ခဏာမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်, စီးပွားရေးအရချို့တဲ့, အဓိကအား Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်လူငယ် (ဎ = 72), နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဟုတ်မဟုတ်အကဲဖြတ်ရန် ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့အလွဲသုံးစားမှု (ADA) သားကောင်။
နမူနာကြီးမားတဲ့, မြို့ပြ, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုဆေးရုံကနေစုဆောင်းနှင့်သင်တန်းသားများကို 53% အမျိုးသမီး, 59% ဟစ်စပန်းနစ် 19% က Black, 14% အခြားလူမျိုး, 6% White ကများနှင့် 1% ကအမေရိကန်ခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ အားလုံးအဟောင်း 16-17 နှစ်ပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ထက်ပိုမိုတစ်ဝက် (51%) တစ်ဦးချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်များကအတူတူညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့တောင်းခဲ့ခြင်းနှင့် 44% တနာတစ်ဦးညစ်ညမ်းအတွက်မြင်ဘူးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့အလွဲသုံးစားမှု (ADA) သားကောင်တစ်ဦးမိတ်ဖက်ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းမြင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်လုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းခံရခြင်း, တခြားသူတွေရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု ပို. မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်အပြီးတွင်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ADA သားကောင်များ၏ 50% နှင့် Non-သားကောင်များ၏ 32% သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ညစ်ညမ်း (p = 0.15) တွင်မြင်သောတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြုပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်း, 58% ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပျော်ရွှင်ခံစားရမကဖော်ပြခဲ့သည်။ ရလဒ်များအသက်မပြည့်သေးသူတို့တွင်ကြောင့်အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကြံပြု, မြို့ပြ-နေထိုင်လူငယ်ဘုံဖြစ်တယ်, ADA သားကောင်နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
KEYWORDS: ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေး; ချိန်းတွေ့အလွဲသုံးစားမှု; ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှု; မိတ်ဖက်အလွဲသုံးစားမှု; မိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုများ; ညစ်ညမ်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း